Aptoide 9.1.0.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.1.0.1 လြန္ခဲ့ေသာ9လက
ဂိမ္းမ်ား ကာစီႏို Aptoide
Aptoide ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Aptoide သည် လွတ်လပ်သော open source Android app စတိုးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး သင့်အား app များကို လွယ်ကူပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းကာ လုံခြုံသော နည်းလမ်းဖြင့် ထည့်သွင်းရန်နှင့် ရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုပါသည်.
Aptoide သည် အသိုက်အဝန်းကို အားပြုပြီး လူမှုရေး အတွေ့အကြုံမှတဆင့် app များအား ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ယင်းသည် မည်သည့် အသုံးပြုသူကိုမဆို ကိုယ်ပိုင်စတိုးများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲရန်၊ ကိုယ်ပိုင် app များအား တင်ရန်၊ အသိုက်အဝန်းမှ ညွှန်းဆိုမှုများကို follow လုပ်ရန်နှင့် ပါဝင်မှု အသစ်များအား ရှာဖွေရန် အခွင့်အရေးကို ပေးပါသည်.
အဓိက Android app စတိုးများတွင် လိုချင်သော app တစ်ခုကို ရှာမတွေ့ ဖြစ်နေပါသလား? ယင်းသည် Aptoide တွင် ရှိနေနိုင်ပါသည်။ စိတ်ပူရန်လည်း မလိုပါ - app များအားလုံးတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များ မပါဝင်အောင် စစ်ဆေးထားပြီး သင့် Android စက်ပစ္စည်းအား အမြဲတမ်း လုံခြုံနေစေရန် ထပ်ဆောင်း လုံခြုံရေး စစ်ဆေးမှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်.
Aptoide သည် လူမှုရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြင့် app ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်းအား ပြန်လည် ဆန်းသစ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲမှုတွင် ပူးပေါင်းလိုက်ပါ!
Aptoide ဖြင့် သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်များမှာ -
- အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန် မလိုဘဲ သင့်စိတ်ကြိုက် Android app များကို လုံခြုံစွာ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
- အခြား Android စျေးကွက်များတွင် မရရှိနိုင်သော app များအား ရှာဖွေခြင်း
- သင့် app များအား ယခင်ဗားရှင်းသို့ ပြန်အဆင့်နှိမ့်နိုင်ခြင်း၊
- သင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုးအား ဖန်တီးပြီး ယင်း၏ အမည်၊ အမှတ်တံဆိပ်နှင့် အရောင်အပြင်အဆင်တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း၊
- Aptoide ၏ ထူးခြားသော apps timeline မှတဆင့် ညွှန်းဆိုထားသော app များနှင့် စတိုးများအား တွေ့ရှိနိုင်ခြင်း၊
- အခြား စတိုးများအား follow လုပ်နိုင်ပြီး သင့်အား မည်သူက follow လုပ်ထားသည်ကို သိနိုင်ခြင်း - စိတ်မပူပါနှင့်။ သီးသန့်ဖြစ်အောင်လည်း ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါသည်။
- App များနှင့် စတိုးများအား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အခြား အသုံးပြုသူများ၏ မှတ်ချက်များကိုလည်း စာပြန်နိုင်ခြင်း။
- အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု မလိုဘဲ app များအား သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် မျှဝေပါ.
Aptoide အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Aptoide အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Aptoide အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
savou စတိုး 15.89k 9.71M
Aptoide ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
Bingo Bash: Online Bingo Games Free & Slots By GSN
ေနာက္ထပ္ ကာစီႏို အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Aptoide အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.1.0.1
App Name: Aptoide
File Size: 20.11MB
Release date: 2018-09-14 08:56:22
လက်မှတ် SHA1: D5:90:A7:D7:92:FD:03:31:54:2D:99:FA:F9:99:76:41:79:07:73:A9
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Portugal
Aptoide APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ